I-Supermap GIS ngumboneleli ngenkonzo ekudala emile onerekhodi yomkhondo ukusukela oko yaqalwa kuluhlu olubanzi lwezisombululo kwimeko ye-geospatial. Yasekwa ngo-1997 liqela leengcali kunye nabaphandi ngenkxaso ye-Chinese Academy of Sciences, isiseko sayo ...
Geospatial - GIS, Ukuprinta kokuqala
Xa kuthelekiswa neenguqulelo zeLifa leMveli leArcMap, iArcGIS Pro sisicelo esinomdla ngakumbi nesisebenzisanayo, yenza lula iinkqubo, ukubonwa, kunye nokuziqhelanisa nomsebenzisi ngokusebenzisa ujongano lwayo olwenziwe ngokwezifiso; ungawukhetha umxholo, ubeko lwemodyuli, izandiso, kwaye awuzukuba naxhala lokukhipha ngaphambili xa kukho uhlaziyo olutsha. Yintoni enye esinokuyilindela ...
ArcView ESRI umbono yam yokuqala
ArcGIS-ESRI, Ukuprinta kokuqala
Xa ufuna ukubonisa isixhobo okanye inkqubo, uninzi lweengcali zibhenela kwizifundo zevidiyo kumaphepha awodwa ngesihloko, yiyo loo nto abo bazinikeleyo ekwenzeni umxholo wemultimedia kufuneka bathathele ingqalelo izinto ezinokuchaphazela izixhobo ngexesha lokudalwa kwazo. , ezinje ngeaudiyo. Kule…
Ukufundisa i-CAD / GIS, Ukuprinta kokuqala
Kweli xesha litsha le-2.0, iitekhnoloji zitshintshile kakhulu, kangangokuba zisivumela ukuba sifikelele kwiindawo ezazingenakwenzeka ngaphambili. Okwangoku izigidi zezifundo ziveliswa kwizihloko ezininzi kwaye zijolise kuzo zonke iintlobo zabaphulaphuli, ekuhambeni kwexesha kuye kwaba yimfuneko ukuba nezixhobo ezigcina iintshukumo esizenzayo ...
Yonke imihla siyabona ukuba iimfuno zethu ziyatshintsha kwaye ngenxa yezizathu ezahlukeneyo siyanyanzeleka ukuba sifumane iPC Software, iGPS, kunye neeTetroli ezahlukeneyo, nganye inenkqubo eyahlukileyo, inesidingo sokufunda kwinkqubo nganye, nalapho ukungahambelani kwedatha kuhlala kungenakwenzeka ukudlula ...
GPS / Izixhobo, Ukuprinta kokuqala, Topography
Ngaphambili: Ukugcina yonke into enxulumene nejografi kunye nophuhliso lweemaphu kwilizwe ngalinye kubangele ukusekwa kweearhente zikarhulumente ezijongene nalo msebenzi ubalulekileyo. Ngamanye amaxesha kuxhomekeka kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezokhuselo okanye enye ngokweetshathi zombutho welizwe ngalinye, olu hlobo ...
Simple GIS Software: GIS yiseva $ 25 client ze Web for $ 100
Namhlanje siphila kwimiboniso enomdla, apho isoftware yasimahla kunye neyokuhlala ihlala khona, enegalelo kushishino kwiimeko zokhuphiswano ezilinganayo yonke imihla. Mhlawumbi umba we-geospatial yenye yeendawo apho izisombululo zemithombo evulekileyo zomelele njengezisombululo zelayisensi ezingahlawulelwayo; kodwa,…
Okufumaneka, Geospatial - GIS, Ukuprinta kokuqala
Kuhlelo lweCONNECT lweMicrostation, eyasungulwa ngo-2015 kwaye yagqitywa ngo-2016, iMicrostation iguqula ujongano lwayo lwemenyu esecaleni kwimenyu ephezulu yeOfisi yeMicrosoft Office. Siyazi ukuba olu tshintsho luzisa iziphumo kumsebenzisi owaziyo ukuba angawafumana phi amaqhosha, njengoko kwenzekile kubasebenzisi be ...
Microstation-Bentley, Ukuprinta kokuqala
I-MyGeodata yinkonzo emangalisayo ye-Intanethi ekunokwenzeka ngayo ukuba kuguqulwe idatha ye-geospatial, eneefomathi ezahlukeneyo ze-CAD, ze-GIS kunye neRaster, ziye kolunye uqikelelo kunye nenkqubo yokubonisa. Ukwenza oku, kuya kufuneka ulayishe ifayile, okanye ubonise i-url apho igcinwe khona. Iifayile zinokulayishwa nganye nganye, okanye ...
I-JOSM -I-CAD yokuhlela idatha kwi-OpenStreetMap
I-OpenStreetMap (i-OSM) mhlawumbi yenye yemizekelo ebalaseleyo yendlela ulwazi olunikezwe ngendlela yokusebenzisana lunokwakha ngayo imodeli entsha yolwazi lweemaphu. Ngokufana neWikipedia, inyathelo liye labaluleka kakhulu kangangokuba namhlanje kubaphenduli bezinto zehlabathi kukhethwa ukubeka olu luhlu ngasemva kunokukhathazeka ngokuhlaziya ulwazi lwakho ...
Ukufunyanwa kweepateni zomhlaba zezehlo zolwaphulo-mthetho kunye nezinto eziqhubekayo ngumcimbi onomdla kuye nawuphi na uRhulumente okanye urhulumente wengingqi. I-CAST ligama lesoftware yasimahla, ii-inishiyali ze-Crime Analytics ze-Space-Time, neyasungulwa ngo-2013 njengesisombululo somthombo esivulekileyo sohlalutyo lobuchwephesha, kunye neepateni ...
Isamkeli seGPS sesixhobo se-iOS, esifana ne-iPad okanye i-iPhone, sifumana ukuchaneka ngokokulandelelana kwaso nasiphi na esinye isikhangeli: phakathi kweemitha ezimbini ukuya kwezi-2. Ngaphandle kweGIS Kit, sibonile amanye amathuba ambalwa okuphucula ukuchaneka kwawo, nangona kunjalo enkosi ngokubonisana nomhlobo, sikufumanisa kunomdla ukujonga oku ...
GPS / Izixhobo, Ukuprinta kokuqala
Umphathi Spatial khona ukuze Bricscad
Siyavuya ukuphawula ukuba i-version yokuqala ye-Spatial Manager ye-BricsCAD isetyenziswe, ngoko ke abasebenzisi banokusebenzisa ii-GIS iinkqubo kwi-software ye-CAD ephantsi.
AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, Ukuprinta kokuqala
I-georgocation yangaphakathi phantse kuyo yonke into esiyenzayo, sisebenzisa izixhobo zombane, yenze ukuba umba we-GIS ukhawuleze ngakumbi ukuba usebenzise yonke imihla. Iminyaka engama-30 eyadlulayo, ngokuthetha ngolungelelwaniso, indlela okanye imephu yayingumbandela othile. Isetyenziswe kuphela ziingcali zeemaphu okanye ngabakhenkethi abangakwaziyo ukwenza ngaphandle ...
MDT, isisombululo esipheleleyo seProjecting and Engineering
Ngabasebenzisi abangaphezu kwe-15,000 kumazwe angama-50 kwaye bafumaneka ngeSpanish, isiNgesi, isiFrentshi kunye nesiPhuthukezi phakathi kwezinye iilwimi, i-MDT sesinye sezicelo zokuthetha iSpanish ezithandwa kakhulu ziinkampani ezinikele kubuchwephesha be-geoengineering. I-APLITOP inephothifoliyo yayo kwiintsapho ezine zezicelo: iiprojekthi zobume bendawo, usetyenziso lomhlaba onesitishi esipheleleyo ...
I-AutoCAD Course umbono yam yokuqala
AutoCAD-AutoDesk, Okufumaneka, Zobunjineli, Ukuprinta kokuqala, Topography
IBlogPad-Umhleli weWordPress kwi-iPad
Ekugqibeleni ndifumene umhleli onelisekileyo kwi-iPad. Ngaphandle kokuba yiWordPress iqonga lokubloga eliphambili, apho kukho iitemplate ezikumgangatho ophezulu kunye neeplagi, ubunzima bokufumana umhleli olungileyo bekusoloko kuyingxaki. Kwidesktop andifumani nto. Ndizamile iBlogPressPress, iWordPress ye-iOS, iBlog Docs, ...
Apple - Mac, Internet kunye neBlogs, Ukuprinta kokuqala